व्यवसाय वा रोजगारी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्यानको बारेमा यी जानकारी राख्नुस्
Fri, Dec 13, 2019 at 9:02pm
सिद्धबाबालाई पुनः ३ दिन निगरानीमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश #आहा खबर# बेलायतमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री जोनसन बकिङ्गम दरबारमा #आहा खबर# सागका पदक विजेता खेलाडीलाई धुमधामकासाथ नगरपरिक्रमा (फोटो फिचर) #आहा खबर# वैज्ञानिक 'एकीकृत भूमि ऐन' ल्याउने तयारीमा जुट्यो सरकार #आहा खबर# जीवित देवी कुमारीलाई यस वर्षदेखि मासिक १५ हजार भत्ता #आहा खबर# उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात, उपत्यकामा हल्का वर्षा #आहा खबर# शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भए विद्यालयलाई स्रोत अभाव हुँदैन : नेकपा महासचिव पौडेल #आहा खबर# त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकको झण्झट सकियो, निर्माण फटाफट #आहा खबर# नयाँ नक्सा अविलम्ब जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन #आहा खबर# यी हुन् जाडोमा छाला जोगाउने ५ उपाय #आहा खबर# जिम्मेवारीबाट विमुख हुने अधिकार प्रहरीलाई छैन : गृहमन्त्री थापा #आहा खबर# ‘समाजवादोन्मुख जनवाद’ का लागि नेकपा विधानबाट ‘जबज’ हटाइँदै #आहा खबर# ट्याक्सीमाण्डु एप सार्वजनिक, अब बोलाउनुस् ट्याक्सी घरमै #आहा खबर# बेलायतमा आमनिर्वाचन : कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई ‘ऐतिहासिक’ बहुमत #आहा खबर# भारतको 'काउन्टर' मा सीमा सुरक्षा बल बढाउँछौं : गृहमन्त्री थापा #आहा खबर#
बुधबार, २२ श्रावन २०७६,	आहाखबर	1.62K
आर्थिक गतिविधिमा संलग्न जो कोही प्यानको दायरामा आउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । प्यान व्यक्तिगत र व्यावसायीक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । जागिर गर्ने, आफ्नो नामको व्यापार गर्ने, सेयर कारोबार गर्ने लगायतमा व्यक्तिगत प्यान प्रयोग हुन्छ ।
कुनै कम्पनी दर्ता गर्नुपरेमा व्यवसायीक प्यान प्रयोग हुन्छ । व्यक्तिको नामको प्यानबाट पनि व्यवसाय गर्न मिल्छ । त्यो निजी व्यवसाय हुन्छ ।
स्थायी लेखा नम्बर प्रत्येक करदातालाई पहिचान दिन दिइने स्थायी संकेत अंक हो । यो नौ अंकको हुन्छ । यो संकेत एकपटक लिइसकेपछि उही व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा अन्य विवरण बदलिएपनि करदाताका लागि सधैँभरी सोही संकेत अंक कायम रहन्छ । यसैले स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो ।
व्यावसायिक प्यान लिनका लागी के गर्ने ?
व्यवसाय वा रोजगारी गरेपछि कुनै न कुनै रुपमा सरकारलाई कर बुझाउनै पर्ने हुन्छ । व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि कर कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्दछ ।
प्यान लिन व्यवसाय र संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्था वा व्यवसाय दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, एकलौटी फर्मको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, यदि एकभन्दा बढी एकलौटी फर्महरू भएमा सबैको दर्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू आवश्यक पर्छ ।
मूख्य कारोबारस्थलको नक्सा, सञ्चालक समितिको निर्णय, कम्पनीको हकमा अख्तियारवालाको फोटो समावेश गर्नुपर्छ । प्यानको संकेत संख्याबाट प्राकृतिक व्यक्ति वा कम्पनी भनेर छुटिदैन
व्यक्ति वा कम्पनीलाई स्थायी लेखा नम्बरको रुपमा त्यही नौ अंकको संकेत दिएको हुन्छ । यसबाट प्राकृतिक व्यक्ति वा कम्पनी भनेर छुटिदैन ।
प्यान लिएको केही वर्षमै व्यवसाय बन्द भएमा र पुन व्यवसाय गर्नुपरे के गर्ने ?
व्यवसाय बन्द भएमा वा आय आर्जन नभएमा सोको जानकारी कर कार्यालयमा दिनुपर्छ । कर कार्यालयले एक पेजको फर्म उपलब्ध गराउने छ सो फर्ममा आफ्नो व्यवसाय बन्द भएको जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर, स्थायी लेखा नम्बर खारेजी हुँदैन । यदि उक्त व्यक्ति पुनः कारोबारमा संलग्न हुन चाहेमा सोही स्थगित भएको स्थायी लेखा नम्बरबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ ।
सेयर बेच्नका लागि लिएको प्यान नम्बरले अरु कारोबार गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरु पनि सुनिने गरेका छन् । यही प्यान नम्बरको प्रयोग व्यवसायमा गर्न मिल्छ । जस्तै ए भन्ने व्यक्तिले सेयर कारोबारका लागि प्यान नम्बर लिएको छ र उसले त्यही प्यानले निजी आफ्नै नामको व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने सो प्यानबाट गर्न मिल्छ ।
व्यक्तिको मृत्युपछि सो प्यान अर्कोले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
एउटा व्यक्तिले लिएको प्यान आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा स्थगित गर्न मिल्छ र फेरि आर्थिक गतिविधि हुन थाल्यो भने व्युताउन पनि मिल्छ । तर सो व्यक्तिको मृत्युपछि सोही नम्बरको प्यान अर्कोले चलाउन मिल्दैन । त्यो स्वत्तः प्रयोगमा आउँदैन ।
यस्तै नागरिकता त्यागी देश छोडेको अवस्थामामा पनि प्यान खारेज हुन्छ ।
कहाँ कहाँ प्यानको उल्लेख गर्ने ?
आफुले गर्ने कारोबार, विलबिजक, खातावही, आयविवरण लगायत बैंकिङ कागजात तथा कर सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात (आयकर, मुअकर, भन्सार, अन्तशुल्क समेत) मा प्यान उल्लेख गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
व्यक्तिगत प्यानलाई व्यावसायीक प्यानमा रुपान्तरण कसरी गर्ने?
व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि व्यक्तिगत प्यानलाई व्यावसायीक स्थायी लेखानम्बरमा परिवर्तनका लागि व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा सजिलै रुपान्तरण हुन्छ ।
प्यान नलिइ कारोबार गरेमा के हुन्छ ?
प्यान नलिइ कारोबार गरे आयकर ऐनको अनिवार्य वयवस्था नमाने बापत एनेको दफा ११९ को क अनुसार ५ हजार देखि ३० हजारसम्म जरिवना हुनसक्छ ।
साथै आयात निर्यात गर्दा , बैंकिङ कारोबार गर्दा वा सरकारी सार्वजनिक निकायसँग सरोकार पर्ने कार्य गर्न नपाइने हुन सक्छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको दाबी, अर्थ मन्त्री खतिवडाकाे असन्तुष्टि
सुनको भाउ उकालो चढ्दै, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
सरकारी अनुदानमा खुलेको चिया कारखानाद्वारा साढे ८ करोडको चिया बिक्री
निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको मूल्य, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
ऊर्जामा लगानी गर्न आग्रह ऊर्जामन्त्री पुनको आग्रह
आइतबार प्रतितोला रु ५०० ले घटेको सुन सोमबार २०० ले घट्यो
योजना ६३ करोडको, कोषमा रकम ५० लाख, बन्ला १०८ फिटको मूर्ति ?
ओरालो लाग्दै सुनको मूल्य, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
अझै २३ लाख जनाले लिएनन् प्यान नम्बर
‘घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन सरकारको प्राथमिकता’
सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राउनेमा १९औं स्थानमा नेपाल
वैदेशिक व्यापार : आयात ७ प्रतिशतले घट्यो, निर्यात २४ प्रतिशतले बढ्यो
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ८४ % काम सकियो, यसै सालबाटै सञ्चालन
सहुलियत कर्जा : ‘सबै कागजात पूरा गरी ऋण नपाए खबर गर्नुस्’
बालुवाटारमा निर्माण व्यवसायीको दोस्रो दिन शान्तिपूर्ण धर्ना
रसुवागढी नाका : भन्सार शुल्कबाट रु २४ अर्ब राजश्व सङ्कलन
कोप–२५ मा नेपालले कार्बन व्यापारको विषय उठाउने
उच्चको आदेश बदर : बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व सिइओ श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
जौलजीवी मेलामा ल्याइएका जुम्ली घोडाको व्यापार ह्वात्तै घट्यो
सुनको मूल्य प्रतितोला ७१ हजार ६ सय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कती ?
कालोसूचीमा दर्जनौं विदेशी कम्पनी, चिनियाँ कम्पनीको संख्या बढी
सत्ताइस लाख राजश्व सङ्कलन !
आकासियो मूल्य वृद्धि, कुन क्षेत्रको कति ?
एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला
बेलायतमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री जोनसन बकिङ्गम दरबारमा
वैज्ञानिक 'एकीकृत भूमि ऐन' ल्याउने तयारीमा जुट्यो सरकार